Guddoomiye ka soo goostay Somaliland: Aan ka aheyn Sool “ma jirto Soomaaliya meel ay ka dhacday qabiil qabiil haysta oo sida xoolaha habeenkiina soo xeraysanaya aroortiina oodda ka qaadaya oo tirsanaya casarkii 1 iyo 2 iyo 3” – Radio Daljir
Guddoomiye ka soo goostay Somaliland: Aan ka aheyn Sool “ma jirto Soomaaliya meel ay ka dhacday qabiil qabiil haysta oo sida xoolaha habeenkiina soo xeraysanaya aroortiina oodda ka qaadaya oo tirsanaya casarkii 1 iyo 2 iyo 3”
Maajo 30, 2018 3:44 g 0
Cabdiqani Maxamuud Cabdi, Guddoomiyihii degmada God’aalo ee gobolka Sool ee Soomaliland magacoowday (Somaliland ugu magacaaban degmo gobolka Xaysimo), ayaa maanta ka soo goostay Soomaliland. Guddoomiyaha ayaa maanta markii u soo gaaray Garoowe waxa uu isla markiiba qabtay shir jaraa’id, asaga oo ku faahfaahiyey dhibaatooyinka maanta ka taagan gobolka Sool, siiba magaalada Laascaanood.
Cabdiqani ayaa ka sheekeeyey dhibaatada baaxada leh ee maamulka Sooomaliland ay ku hayaan dadka Shacabka, asaga oo yiri, “ma jirto Soomaaliya meel ay ka dhacday qabiil qabiil haysta oo sida xoolaha habeenkiina soo xeraysanaya aroortiina oodda ka qaadaya oo tirsanaya casarkii 1 iyo 2 iyo 3. Ma jiro qabiil saylad laga furay gobolkiisii oo dadkiisii saylad loo furey.”
Asaga oo hadalka sii wata waxa uu ku daray, “shakhsiga bini’aadamka ah ee reer Laascaanood soodeyntiisa $100 bay maraysey shalay oo anaa Laascaanood joogay … intii dadkiinii jeel lagu xeraystay xabsi oo afka kab lagala dhacay, oo badh dhaawacanyahay, oo badh madaxu wada daloolo … baa inta jeel lagu xeraystay baa la yiri keena lacag la idin ku soo daayo. Waxaas baad dugsaneysaan.”
Hoos arag warsaxaafadeed Puntland ka soo saartay cabburinta iyo sayladda loo furtay shacabka Sool.
Warsaxaafadeed Puntland: “Laascaanood waxaa ka socda caburin, xarig iyo jirdil … loo geysanayo hooyooyin, arday iyo shacab nugul oo aan waxba galabsan” (akhriso)
Siyaasadda & Dhaqaalaha 457 Wararka 17853
Xildhibaan Saadiq Abshir Garaad: “Waqtigii caburinta iyo cadaadiska Somaliland waa soo dhamaadey oo reer Laascaanood mar dhow waa la xoraynayaa”